Mishel Montinyak - a okunomsoco umhlaba wonke futhu ungumdali ukudla esiyingqayizivele. Siyabonga kuye, izigidi besifazane nebesilisa atholwe ukuma ofiselekayo, ukuphulukisa umzimba wakho futhi ukushintsha indlela yakho yokuphila. Iyini imfihlo ye-amasu nendlela yakhe ukuthi isebenza kanjani ingatholakala kulesi sihloko.
History of the indlela Montignac
Ngasekuqaleni komsebenzi wakhe Montignac wasebenza njengoba emelele kwelinye yezinkampani ezinkulu ezithaka imithi. komsebenzi wakhe ukuhlangana namakhasimende, bezimali kanye nezinye izimenywa ebalulekile inkampani. Umhlangano indawo kanye nezethulo, njengoba umthetho, kukhona zokudlela nezindawo zokudlela ezinhle. Ngaphezu kwalokho, okunomsoco siyahamba njalo futhi kwadingeka ukuluma ebaleka. Umsebenzi onjalo ngokuhlanganyela yokuphila Montinjaka kwaholela esigabeni ukukhuluphala yesibili. Ukhuluphele wasala kuya okunomsoco esizayo futhi wadala eziningi izinhlelo.
Yilokho kanye waqala ibanga elide kokudala Ukudla okufanele. Michel Montinjak bazama izindlela amashumi fashion kwesisindo mass. Kodwa akekho kubo akamnikelanga elamukelekile. Khona-ke waqala ukuthuthukisa indlela yakhe siqu. Ngemva kokucabangela zonke izinzuzo nezingozi zonke ukudla lidlule, okunomsoco wazakhela imfundiso yokuziphendukela isisindo okweqile. Futhi ngithola indlela ukubhekana naso.
Inkinga ikuphi-ingabe isisindo esengeziwe
Mishel Montinyak ukholelwa ukuthi inkinga ibangelwa ukukhuluphala iyona insulini i-hormone, ekhishwa indlala yegilo. Yandisa igazi insulini avuse carbohydrate elula. Lapho ukusetshenziswa kwabo izinga likashukela egazini liyaphuma, ukunciphisa ke, umzimba ukhiqiza i-insulin.
Inkinga wukuthi uma umuntu esidla esiningi carbohydrate, ushukela liphuma ngokushesha. Futhi kunciphisa insulini ngokushesha ukuya kusilinganiso ngezansi. Ngenxa yalokhu, umzimba uqala miss ushukela. Yena inika isignali kuya ebuchosheni ukuthi kubalulekile ukuba ubuyise ezingeni layo ngokudla carbohydrate elula. Kuyinto umjikelezo omubi. Man ukudla elimnandi futhi emva kwesikhathi esithile ke ufuna ngaphezulu.
Ukuze ugweme iyehla iyenyuka elibukhali ezingeni ushukela, Mishel Montinyak linikeza ukudla ukudla nge Inkomba ongaphakeme glycemic, ithinta ngakho indlela zokukhiqiza we-insulin. Lokhu kuzovumela:
Gcina insulini evamile.
Amafutha - isikhathi okuhlukene.
Gwema isifo sikashukela.
Technique Michel Montignac
Montignac ngokuyinhloko kuqhathaniswa elithi "Ukudla". Ngokusho kwakhe, kudala izinhlangano negative ezihlobene yemikhawulo ukudla, ukulamba, izimangalo ukudla Meatless, ukudla kunganambitheki, ukukhathala, ubuthakathaka kanye nezinye izinto. Akazange nje awukuvimbeli yokudla, kodwa futhi ukhuthaza ukusetshenziswa okumnandi, ukudla okunomsoco. Mhlawumbe, yingakho Mishel Montinyak kwabesifazane baba isithombe.
Michel Montignac indlela kusekelwe zokunciphisa ukudla nge okusezingeni eliphezulu Inkomba glycemic nokukhuphula - ongaphakeme.
imikhiqizo okunqatshelwe zihlanganisa:
Ushukela kunoma yiluphi uhlobo.
Isitashi kanye nemikhiqizo equkethe ke.
imifino Sweet, ezifana beet kanye izaqathi.
izithelo Sweet, ezifana ubhanana, amagilebhisi, umango.
okusanhlamvu Okwenziwe ezifana ezimhlophe irayisi ophucuziwe noma semolina.
Isinkwa ikakhulukazi emhlophe.
izitsha Kuhlanganiswe, okuyinto kokubili aqukethe eningi fat kanye carbohydrate. Ngokwesibonelo, amakhekhe, amazambane athosiwe, irayisi kanye nokunye okufana nalokho. D.
imikhiqizo kuvunyelwe zihlanganisa:
Imifino, oluhlaza ikakhulukazi.
Izithelo njengama-apula, izithelo ezisawolintshi, ukwatapheya, amapentshisi, ikiwi kanye nabanye.
okusanhlamvu ezingaqubunguliwe ezifana nokunye okufana nokolweni noma irayisi elinsundu.
Pasta kusukela durum ukolo.
inyama Red. Singasho kudliwa nemifino, kodwa asivumelekile, kanye okusanhlamvu pasta.
Bird, akukhetha ukukhetha webele.
Fish kuzo zonke izinhlobo.
Ubisi nobisi imikhiqizo.
Imikhiqizo ezenziwe ngesisekelo soy, ezifana Tofu nobisi.
Njengoba singabona, uhlu imikhiqizo bavunyelwe libanzi. Ukulahlekelwa isisindo akudingeki ukuba azibulale noma adle okuyisidina. Nsuku zonke, ungakwazi ukupheka ezihlukahlukene zabo siqu izitsha. Kodwa khumbula ukuthi inani amafutha kuyadingeka ukunciphisa futhi ugweme ngokuhlanganisa ngayo ama-carbohydrate, ngisho eziyinkimbinkimbi.
Mishel Montinyak: Imenyu
Lolu khetho imenyu uyisibonelo futhi yakhelwe ukuqinisekisa ukuthi ukuncipha kwadingeka umqondo nsuku zonke Ukudla Montignac:
Isidlo sasekuseni: oatmeal steamed ubisi, izithelo noma amajikijolo.
Isidlo sasemini: eyodwa uhlobo izithelo ngaphandle ubhanana namagilebhisi.
Isidlo sasemini: yenkomo abilisiwe zemifino isaladi.
Umthamo: cottage shizi nge imifino noma izithelo.
Dinner: ngiyocasha amaqanda amabili amaqanda, amakhowe nemifino.
Ngaphambi kokulala nawe ungadla yogurt ezingenashukela.
Ukudla Michel Montignac ihlukaniswe izigaba ezimbili. Enhlabathini kukhona ukwehliswa nokulawula okuqinile carbohydrate yokuqothulwa. Ivunyelwe kuphela labo imikhiqizo abe Inkomba ongaphakeme glycemic. ubude bayo incike kumuntu futhi bangaki Kilos efuna ukwehlisa isisindo somzimba. Lapho neminye ephumelelisa isisindo efiselekayo, wabe sesibili - ukuhlanganiswa. It bavunyelwe ukudla nge Inkomba okusezingeni eliphezulu glycemic, kodwa izinto eziningi ezincane.
Lesi sinyathelo ungaba obuphelele ezahlukene futhi kuncike oyifunayo isisindo neminye. Ngalesi sikhathi, udinga asondele ngokucophelela ukukhetha imikhiqizo. Ngokwesibonelo, kungcono makudle inhlanzi oily futhi ukwatapheya. Ziqukethe izinto eziningi acid yezimbiwa, okuyinto hhayi kuphela ingabe kungalimazi sibalo, kodwa sisiza ngcono. Ngokungafani ibhotela yemifino uwoyela.
Phakathi imikhiqizo amaprotheni kungcono ukukhetha ephansi fat yokudla. Ngokwesibonelo, inkukhu webele, yenkomo ebomvu, inyama yenkonyana, inhlanzi omkhaya cod, cottage shizi, amaqanda, kwasolwandle, nokunye. D. Futhi kumelwe siyiyeke okunamafutha yengulube nemvu.
Ngokuqondene carbohydrate, Inkomba yabo glycemic kumele singeqi amaphuzu 40. Okungukuthi, imifino, izithelo oluhlaza, amakhambi, okusanhlamvu ngesilinganiso esincane.
Imikhiqizo kungenziwa kuphekwe, sikadali bese ukuphela ambalwa. Fry kubo akuvumelekile.
Ngesikhathi Ukudla, kuyinto efiselekayo sihlanganyele emidlalweni. Ngokukhethekile overload umzimba okuthena amandla amakilasi ku simulators. Ungahamba emoyeni opholile noma ukuvivinya umzimba ekuseni.
Futhi kudingeka baphuze amanzi amaningi okumsulwa, mayelana 1.5-2 amalitha ngosuku. Itiye nekhofi kungukuthi akufakwanga kuleli nani.
Lesi sinyathelo kuyinto sinjalo. It yakhelwe ukukhiqiza ewusizo imikhuba yokudla kanye ophumayo ngokucophelela kusukela ekudleni. Uma sikubeka kalula, njengoba sinjalo kuzosiza ukugwema isisindo uphinde ukwazi.
Phakathi nale nkathi, kwandziswa kwelinani letikhungo carbohydrate avunyelwe kule ekudleni. Ungakwazi udle okusanhlamvu eluhlaza, pasta kusukela durum ukolo, imifino amnandi. Ungase futhi ukwandisa inani imifino kwimenyu nsuku zonke.
Isigaba sesibili ihlala izinsuku eziningi njengoba aqhubeka kuqala. Lokho, uma esigabeni sokuqala iye owenziwe ngenyanga eyodwa, kuqiniswa ihlala nse.
Mishel Montinyak: Incwadi
Udokotela Wokudla Okunempilo akagcinanga eliyingqayizivele kwesisindo indlela, kodwa futhi immortalized ke ezincwadini zakhe. Kule minyaka edlule, umsebenzi wakhe okuye kwabhalwa ningi sizo for kwesisindo. Zichaza indlela Montignac kanye nezici zayo, izinzuzo nezingozi. Kanye amacebiso awusizo neseluleko kulabo abafisa kunonophisa luhlelo kwesisindo.
Uhlu lwezincwadi nge Michel Montignac:
"Izimfihlo Yamandla Zonke".
"Indlela kwesisindo Montignac. Ikakhulukazi abesifazane. "
"Imfihlo wobusha bakho."
"Mishel Montinyak. Yidla futhi ulahlekelwe isisindo. "
"Izimfihlo lokudla okunempilo ezinganeni."
"UMichel Montignac indlela kwesisindo."
"100 zokupheka best kusuka Michel Montignac."
"Dine futhi ulahlekelwe isisindo."
Wonke umuntu ofuna ukuba anciphise umzimba, bheka omncane, ngcono impilo yakho futhi nje ukuphila kwakho kube ngcono, mina edingekayo ukuze ufunda lezi zincwadi. Bona Mishel Montinyak hhayi kuphela izingxoxo mayelana amasu nendlela yakhe, kodwa futhi abelana izimfihlo enempilo futhi esihlwabusayo.
Ekupheleni kwe-athikili kumele kuphetfwe ukuthi Mishel Montinyak kuyinto okunomsoco ekhaliphile. Akafuni nje athuthukile uhlelo amandla, kodwa sabonakala ahlangabezana nakho ngokuqomisana. Izincwadi nencazelo diverged kusakazwa izigidi zamakhophi futhi ziye zahunyushelwa emakhulwini ezilimi. Futhi uma umuntu efuna ukuba anciphise umzimba, ukushintsha ukuphila kwakho futhi ube nempilo, kufanele sinake indlela Montignac.
Awazi kanjani cisha "Avtoplatezh" we Savings Bank? Kunezindlela eziningana kuya nethembekile!